Ọ bụ ezie na WhiteboardR na-ahapụ gị ka ị jiri ngwa kọwaa ụdị azụmaahịa agbakwunyere, nke dị n'otu, nke azụmahịa, MappR na-enye gị ohere ịsepụta silos dị iche iche pụrụ iche nke data na ụdị WhiteboardR dị n'otu. Na MappR, ị nwere ike ịlele isi data wee bido mepụta eserese. Ka anyị kwuo na site na otu silo ị nwere àgwà chukwuka na ọzọ na silo, ị nwere àgwà so_ndu, na ị maara ndị a na-ezo aka na onye ahịa. Na MappR, ị nwere ike ịkọwapụta àgwà abụọ a na njirimara jikọtara ọnụ ahịa_id ị kọwaaworị na ụdị WhiteboardR dị n'otu. Ozugbo ị depụtara njirimara ịchọrọ maka isi mmalite, MappR nwere ike ibubata faịlụ site na silo ahụ, a ga-etinye ya na akpaghị aka n'ime ụdị WhiteboardR ma bụrụ nke ana - achọta ozugbo na otu echiche. You nwere ike ịga n'ihu na-egosi isi mmalite map na ingest data n'ụzọ dị otú a ruo mgbe ị mejupụtara data ịchọrọ maka otu echiche.